Trio cusbo leh oo dhalo ah - Sanduuqa Asada | Black Périgord gawaadhida waaweyn ee sanduuqa loogu talagalay VIP - VIP truffles.
Soo hel sanduuqan quruxda badan ee seddexda cusbo ee dhadhanka madow iyo saliiddiisa dabiiciga ah ee madow.
Kani waa sanduuqa midabaynta dubitaankaaga ama qorshahaaga!
Sanduuqan quruxda badan ayaa sidoo kale kaamil noqon doona miiskaaga si uu u weheliyo suxuuntaada uguna guuleysto martidaada.
Si aad hadiyad u siiso ama u soo jiito martidaada, tani waa iibka ugu habboon ee VIP!
Sanduuqan waxaad ku leedahay:
- 1 cusbo hymalya
45 g oo ah Hawaiian cusbo madow, oo leh 3% xamuul madow;
45 g oo ah cusbada Guérande, oo leh 3% dhaymo madow;
45 g oo ah cusbada Himalayan ee casaanka ah, oo leh 3% xamuul madow;
1 saliid saliid saytuun madow (50ml) AOP des beaux de Provence Organic oo leh caraf udgoon madow
Hawaiian cusbo madow
Neefsashada leh midabkeeda dhuxusha madow ee ka timaadda ku darista dhagaxyada dhagaxyada ee haamaha dejinta, milixdaas dabiiciga ah oo dhan ayaa ka buuxa macdano. siin doonaa ruuxa iid ah si ay u verrinrin iyo rooti.
Himalayan cusbo casaan ah
Mid ka mid ah cusbada dhagxaanta dhifka ah, ama cusbada dhulka, cusbada Himalayan ee casaanka ah waa mid aad u khafiif ah maadaama aan iodized ahayn. Aad u qalalan, milixani waxay ku habboon tahay miraha. Dheeman cusbo waxay sifiican ula socotaa dhamaan suxuunta waxayna leedahay awood milix leh oo ka hooseysa fleur de sel.
Waxsoosaar dabiici ah oo dhadhan fiican leh, milixda Guérande waxay sifiican ula socotaa dhamaan suxuunta macaan waxayna keenaysaa qoto dheer udgoonkeeda iyo gogo 'truffles madow.
Saliid saytuun madow oo dabiici ah
Waxaad jeceshahay badeecooyin gaar ah, oo ka tarjumaya argagax iyo dhaqan. Waxaa kugu guuleysan doona saliid saytuun madow oo dabiici ah udgoon dabiici ah oo madow, oo leh saliida PDO ee gobolka Beaux-de-Provence.